मेरो प्रेमी ? | मझेरी डट कम
मेरो प्रेमी ?
ks — Fri, 10/05/2012 - 07:22
निरुपा ढुङ्गाना 'प्रसुन'
अवसर प्रेम दिवसको थियो ।
दिवसले दिएको रातो गुलाफ मैले ब्यागमा राखेँ । धन्न ! फूल पसल पनि नजिकै रहेछ । हतार-हतार पहेँलो गुलाफ किनेँ, सरसलाई दिन । सरसको बिहे हुनुअघि भेट्ने स्थानमा पहिले मै पुग्थेँ । आज आधा घन्टादेखि ऊ मलाई पर्खिरहेको छ । हतार-हतार पुगेँ, कमलादी मोडको कोर्टयार्ड रेस्टुराँमा ।
"सरी ढिलो भयो । मान्छे र सवारी साधनहरूले अल्झाइदिए ।"
"केही छैन ।"
"बधाई छ बिहेको ।" हात मिलाएँ मैले । उसको बिहेपछिको पहिलो भेट थियो हाम्रो । अनि, हतपत ब्यागबाट पहेँलो गुलाफ झिकेर टेबलमा राखिदिएँ ।
"जरुरी थिएन यो ।"
"प्रेम दिवस मनाएकी होइन । तपाईंको बिहेको बधाईका लागि मात्र ।" मैले भनेँ ।
सरसले धन्यवाद पनि भनेन । चुपचाप मेनु हेर्न थाल्यो ।
म विगतका पानाहरू अनायासै पल्टाउन थालेँ :
१२ कक्षाको परीक्षापछि मेरा दिनहरू सिनेमा हेरेर, इन्टरनेट चलाएर र साथीहरूसँग रमाइला कुरा गरेर बित्थे । कहिलेकाहीँ यसो कथा, उपन्यासका किताब पढ्थेँ । यी सबै कुराले मेरो मनभित्र भने युरिया हालेको बिरुवाझैँ अनेकानेक रहर हलक्क भएका थिए । त्यसैताका बागबजारको आदर्श इन्स्टिच्युटमा भर्ना भएँ, अंग्रेजी भाषा खार्न ।
पहिले म उसको अनुहार मात्रै चिन्थेँ । पछि आदर्श इन्स्टिच्युटका एमडी, सरस खतिवडालाई नामले पनि चिन्न थालेँ ।
पहिले स्थापित दैनिक पत्रिकाको नामी पत्रकार ऊ, विगत सात वर्षदेखि पत्रकारिता छोडेर इन्स्टिच्युट खोलेर बसेको रहेछ ।
बिस्तारै-बिस्तारै उसलाई फोन गर्नु, उसका बारेमा खोजीनिती गर्नु मेरा जरुरी कामको लिस्टमा पर्न थाल्यो । उसको आँखालाई आफ्नो आँखामा टाँसिराख्नु, उसका आवाजलाई आफ्नो मनभित्र गुञ्जाइराख्नु र उसको पूर्णकदको तस्बिर ल्यापटप ब्याकग्राउन्डमा सेभ गर्नु, यी यावत् गतिविधि पर्याप्त थिए, म उसलाई प्रेम गर्छु भन्ने प्रमाणहरू ।
"म त जोगीजस्तै हुँ, मलाई माया नगर्नू... ।"
"झन् जोगीलाई त माया गर्नुपर्छ नि !"
"के अर्थ ? कहीँ नपुग्ने मायाको ?"
"म तपाईंसँग बिहे गर्छु ।" एउटी महिला, म उसका लागि कति निर्लज्ज भइसकेको थिएँ भने आफ्नो बिहेको कुरा आफैँ गर्दै थिएँ ।
"बिहे ! मलाई यस्ता कुरामा विश्वास छैन । यी सब झूटा कुरा हुन् !"
"त्यसो त हाम्रो लाइफ आफैँमा झूट हो नि ! त्यसो भए... तपाईंको अरू कोही गर्लफ्रेन्ड छे हो ?"
मलाई यस्तो लाग्दैथ्यो, ऊ सीधा कुरा गरेर मेरो मन दुखाउन चाहिरहेको छैन । भन्यो, "छैन ।"
"जबसम्म तपाईं बिहे गर्नुहुन्न, तबसम्म म पनि बिहे गर्दिनँ ।"
"फिल्मी कुरा नगर मसँग ।"
"फिल्मी होइन, साँच्चै भनेकी ।"
"जिन्दगीभर बूढीकन्या बस्ने भयौ त्यसो भए ।"
"साँच्चै तपाईं कसैलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्न ?"
"आमालाई । म मेरी आमाबाहेक कसैलाई पनि माया गर्दिनँ ।"
"म पनि तपाईंकी आमालाई माया गर्छु ।"
"इन्जोय योरसेल्फ छायाँजी ! बेटर मलाई माया नगर्नुहोला ।" सरसको यो रूढ व्यवहारले मेरो मन ननिकोसँग दुखेको थियो । केही दिनसम्म त बोलिनँ पनि । तर, यस्ता कुरा बिर्सिहाल्छु । र, पहिलेभन्दा अलिकति बढी नै मन पराउन थाल्छु, झन् बढी माया गर्न थाल्छु ।
एकदिन सोधँे, "किन प्रेमप्रति यस्तो विरक्ति तपाईंको ? कहिल्यै, कसैलाई पनि चाहनुभएन ?"
मैले ठाडै भनेँ, "प्लिज, मलाई एक्सेप्ट गर्नूस् ।"
मेरो कुराले ऊ हाँस्यो र भन्यो, "प्रेम गरेर के हुन्छ ?"
"हुनुपर्नेचाँहि के हो र ?"
यहीबेला उसले कुनै गेस्टहाउसको भिजिटिङ् कार्ड पर्सबाट निकालेर मेरो हातमा थमाइदिएको थियो । मैले पनि बडो जतनसाथ ब्यागमा राखेकी थिएँ । मेरो प्रेम फिल्मी थिएन । उसले भनेकै समयमा पुगेँ । त्यस दिन फर्कँदा म आफ्नो घर नगई आन्टीकहाँ गएँ । घरमा के भन्लान् भन्ने लाग्यो । मान्छेको संगत खोज्ने अभिलाषाले 'गेस्टहाउस'सम्म पुर्‍याइदियो । नराम्रो कत्ति पनि लागेको थिएन । आफैँदेखि अचम्म भने लागिरहेकै थियो । जीवनको मोहले त्यहाँसम्म पुगेकी हुँ म । प्रेम प्राप्तिका लागि । पछुताउ कत्ति पनि छैन । त्यसपछि नै त सरसले नभने पनि निश्चिन्त भएँ, उसले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुराले । सबै कुरा मुखैले भन्नुपर्छ भन्ने पनि त थिएन ।
मेरी दिदी पढ्न-लेख्न सोखिन मान्छे । पहिले-पहिले उहाँको बिहे हुनुअगाडि उहाँलाई मन परेका लेख-रचना जतनसाथ सँगालेर राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ पनि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । अहिले दिदी केही पनि गर्नुहुन्न । सात वर्षअघि अमेरिकी नागरकिसँग बिहे गरेर उतै जानुभएको थियो । पछि दिदीले ती अमेरिकी नागरिकसँग डिभोर्स गर्नुभयो ।
अचेल दिदी हामीसँगै अर्थात् माइतीमै बस्नुहुन्छ । उहाँको पाँच वर्षको छोरा पनि छ । दिदी मभन्दा उमेरमा निकै ठूली हुनुभए पनि म दिदीलाई साथीजस्तै ठान्छु र सबै कुरा सुनाउँछु । दिदी भने मलाई साथीजस्तो कहिल्यै गर्नुहुन्न, कहिले त रसि पनि उठ्छ । केही पनि सुनाउँदिन भन्छु । म सक्तिनँ ।
मैले सरसका बारेमा बताएँ । चिनेझैँ गर्नुभएन । पछि सरसलाई दिदीका बारेमा भनेँ, उसले त चिनेको मात्रै होइन, सँगै कलेज पढेका सहपाठी हौँ भन्यो । म मायाकी बहिनी भनेर सुन्नासाथ अचम्मको अनुहार लगाएको थियो ।
"अमेरिकीले हामी नेपालीलाई के चिनिराख्नु त !"
"त्यस्तो होइन, दिदी ज्यादै भुलक्कड हुनुहुन्छ ।"
दिदीको पक्ष त लिएँ तर दिदी त भुलक्कड मान्छे होइन, किन नचिनेझँै गर्नुभयो होला ? आफैँसँग प्रश्न गरेँ मैले ।
एकदिन दिदीको बुकर्‍याकको सबैभन्दा तल्लो खण्डमा सरसले लेखेका लेख र उसका छापिएका फोटो देखेँ । "दिदी त सरसको त्यत्रो ठूलो फ्यान हुनुहुँदो रै'छ, फेरि किन चिन्दिन भन्नुभएको ?" बुकर्‍याक नजिकै उभिएर सोधेँ मैले ।
"ए, त्यही सरस हो तेरो प्रेमी ? ओहो ! उसले अहिलेसम्म बिहे गरेको रहेनछ ? तँ हिजो भर्खरकी, ऊ त पाको मान्छे हो त !"
निस्फिक्रीसँग भनेँ, "होस् न त! त्यति धेरै फरक होइन । तपाईंकै उमेरको हो ऊ ।"
"धेरै होइन, जम्मा १३ वर्ष नै त फरक हो । होइन के ? फेरि ऊ त बाजे हो, हाम्रो परिवारका कसैलाई मन पर्दैन बाहुनहरू ।"
"जातमा के राख्या छ ? म मन पराउँछु । सकियो ।"
"तेरा लागि दिवसले मरहित्ते गर्छ । पाप लाग्छ, हेर ! त्यसलाई नरुवा ।"
"दिवस सिवस जाओस् जतासुकै । मलाई मन पर्दैन त्यो केटो ।"
दिदी मेरो कुरा सुनेर मज्जाले हाँस्नुभयो । बसिरहेको ठाउँबाट उठ्दै भन्नुभयो, "घरमा बोलाऊँ कफी खान ।"
"तिम्रो प्रेमी सरसलाई ।"
"किन ? मम्मी, बाबाले..." वाक्य पूरा बोल्न सकिनँ मैले ।
"मेरो साथी भनौँला ।" निर्धक्कसँग भन्नुभयो दिदीले ।
घरमा बोलाउनु, दिदीको साथी भन्नु, यी सब किन जरुरी पर्‍यो, म स्वयं बुझ्दिनँ ।
"लौ, हुनेवाला ज्वाइँसाहेबको इन्टरभ्यु लिनुपरेन ?" दिदी मात्रै भएको दिन मैले सरसलाई घर ल्याएँ ।
त्यसपछिका दिनमा मम्मी-बाबा नभएको दिन कहिलेकाहीँ सरस हाम्रो घर आउँथ्यो । सिटिङ् रुममा दिदी र ऊ मात्रै हुन्थे । दिदी पटक्कै बोल्नुहुन्थेन, सरस केही बोल्थ्यो क्यारे! मलाई भने किचनमा चिया-खाजा पकाउँदैमा ठिक्क । दिदीलाई भेटेपछि नै उसले भनेको थियो, "मेरा छोरा र श्रीमती छन् ।"
म तीन छक मात्र होइन, चार छक नै परेकी थिएँ । बिहे नै नगरेको मान्छेको...?
एकाएक सरसले म बिहे गर्दै छु भन्यो । पत्याइनँ मैले ।
मेरो प्रेम, उसको छोरा र श्रीमती, अब यो बिहे ?
त्यहीबेला म कलेजबाट दिल्ली टुर गएँ । फर्कँदा सरसको बिहे भइसकेछ, मेरी दिदी अर्थात् माया कार्कीसँग ।
दिदीको पहिलो बिहे आफ्नै रोजाइको थियो । बाबा-मम्मीले निकै चित्त दुखाउनुभएको थियो त्यसबेला । यो बिहे त बाबा-मम्मीले नै मन्दिरमा लगेर गरिदिनुभएको रहेछ । मलाई पर्खनसमेत जरुरी नठानी । कति हतार भएको होला त!
सरसको परिवार खुसी छैनन् रे! बिहेमा कोही पनि आएनन् रे!
"यहाँ एकदमै ढिलो गर्छन् । हेर न, कफीसम्म आइपुगेन अहिलेसम्म ।" सरसको आवाजले झस्किएँ म ।
पूरै रेस्टुराँ बेलुन र फूलहरूले सजाइएको छ । रेस्टुराँ पूरै एउटा मण्डपजस्तो देख्छु म । दिदी हुनुपर्ने ठाउँमा म किन छु ? मैले बोलेको हर कुरालाई 'फिल्मी' ट्याग लगाइदिन्थ्यो सरस । ऊ आफैँले फिल्मभन्दा चर्को गर्‍यो । अब फेरि किन उसले १४ फेब्रुअरीकै दिन मलाई यहाँ बोलाएको हो कुन्नि ? म हतार-हतार आइपुगेकै छु । के भन्ने हो सुन्न बाँकी नै छ ।
नेपाल साप्ताहिक, अंक ५१५
२०६९ आश्विन १४
मात्र रित्ता हातहरु मलाई गिज्याइरहेछन!
लडाइँ: बेइमान राजनीति विरुद्ध
फर्किएर आउली फेरि
पर्चा छर्दाको हलचल
"संगै बाचौला "
च्यामान लोङ्बा सोम
लिम्बू, लहरा र देश